.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: LavaFox V2-Green
mozilla အတွက် အရမ်းလန်းတဲ့ theme add on လေးပါ။
အောက်ကscreen shot တွေကြည့်လိုက်ရင်သိမှာပါ။
သုံးချင်တဲ့ ဆိုရင် ဒီလင့်မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိူင်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်မကြိုက်ရင်install မလုပ်ခင်မှာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာအရောင်ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
ရွေးချယ်ရမယ့်နေရာကတော့ အဲဒီ page ရဲ့အောက်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။
ဒီ add on လေးကလည်းချစ်သူ ဆီကယူထားတာပါ။ :)
Posted by FlashSongCrazy at 21:56
Labels: add on, Firefox